बच्नुस् सेतो पुतलीबाट, आँखाका लागि हानिकारक! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
बच्नुस् सेतो पुतलीबाट, आँखाका लागि हानिकारक!
काठमाडौं । कसैको एउटामात्र आँखा एक्कासि रातो भएको छ वा छोटो समयमा नै देख्ने शक्ति कमजोर हुँदैछ भने छिट्टै अस्पताल पुग्नु जरुरी छ। त्यो आँखामा लाग्ने सापु रोग (सिजनल हाइपर एक्यिुट प्यान युभेइटिस) हुनसक्छ। यो रोग विशेषगरी बालबालिकामा बढी देखिन्छ। रातो हुने गरी सङ्क्रमण भएपछि केही घन्टादेखि केही दिनमा आँखै नदेख्ने हुन्छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, नेपालमा यो रोग आएको ४० वर्षभन्दा बढी भयो ।
२०३२ सालमा पहिलोपल्ट नेपालमा देखिएको थियो। त्यतिखेर पनि बच्चामा पहिले देखा पर्‍यो । अस्पताल आएका बच्चामा एउटै लक्षण थियो । ‘मोथ (सेतो पुतली) खेलाएको र कसैको आँखामा मोथ परेको देखिएको पाइयो’, आँखारोग विशेषज्ञ डा. अनु मानन्धरले भनिन्, ‘मोथले नै हो कि भनेर त्यो बेलादेखि नै अनुमान गरियो।’
तर, सीधै मोथले गर्दा भएको भन्ने औपचारिक रूपमा प्रमाणित भएको छैन, मोथ यस रोगको जोखिम कारक नै हो भन्ने प्रमाणित भने भएको छ। उहाँका अनुसार यो रोग लागेमा आँखाभित्र ब्याक्टेरिया देखिएको छ। १०–१५ वर्षयता रोगको निदानमा सफलता मिलेको छ। ‘आँखामा ‘एन्टिबायोटिक इन्जेक्सन’ लगाउँदा आँखामा जमेको पिप हटाउन र ज्योति फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने जानकारी भयो’, उनले भनिन्। जीवाणु देखिएको, नदेखिएको दुवै आँखामा एन्टिबायोटिक राख्दा राम्रो परिणाम देखिएको छ।
रोग लागेका बेला १४ देखि ३९ प्रतिशतका आँखामा ब्याक्टेरिया देखिएको उनको भनाइ छ। डा। मानन्धरका अनुसार हरेक एक वर्ष बिराएर यो रोग ठूलै महामारीका रूपमा पनि देखा पर्छ। हरेक वर्ष फाट्टफुट्ट वर्षा मौसममा आउँछ। नेपालमा भने दशैँ–तिहारताका ठूलै प्रकोप हुने सम्भावना रहन्छ। ‘कहिले कुन क्षेत्रमा धेरै हुन्छ कहिले कुनैमा’, उनले भनिन्, ‘प्रदेश ३ र ४ मा वर्ष बिराएर देखिइरहेको छ। प्रदेश १ र २ तिरबाट भने कम आउने गरेको छ।’
नेकपा विद्यार्थीद्धारा कुटिएका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइयो
काठमाडौं । नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही चितवनमा कुटिएका छन्। शनिबार सत्तारुढ दल […]
ब्रिटिश गोर्खाले समान पेन्सन नपाउने
असोज २९, काठमाडौँ - बेलायती सेनामा कार्य गरेका भुतपुर्ब गोर्खा सैनिकले समान पेन्सन नपाउने भएका छन् । […]
साउन, १३ । चितवन, जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको भरतपुर अस्पतालमा थुप्रिएका शव व्यवस्थापन गर्न जटिल बन्दै गएको छ […]
सुन्दरताको राज सेक्स
एजेन्सी, भनिन्न सुन्दरता सधैं कायम रहँदैन। निश्चित उमेरपछि मानिसमा सुन्दरता हराउँदै जान्छ। तर, मेक्सिन […]
फोक्सोको क्यान्सर पीडित संगिता घिमिरेद्वारा सहयोगको यस्तो याचना
सिड्नी, अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा फोक्सोको क्यान्सर पीडित संगिता घिमिरले सहयोगको याचना गरेकी छिन् । उनले […]
साविक विजेता स्पेन इटालीसँग २–० गोलले पराजित
एजेन्सी, युरोकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तरगत सोमबार राति भएको खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन स्पेन इटालीसँग पराजित […]